Sor Juana Ines De La Cruz. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 poems | Zvazvino Zvinyorwa
Sr. Juana Inés de la Cruz Akazvarwa pazuva rakaita nhasi muSan Miguel Nepantla, guta riri muMexico, muna 1651, kunyangwe 1648 ichionekwa mune mamwe manyuko.Anotorwa semumwe wevanyori veMexico. inonyanya kuzivikanwa yezana ramakore regumi nemanomwe. Uye mamiriro ake asista, kure nekuve chibereko chekuzvipira kana kudaidzwa kwaMwari, yaive nechokuita nechishuwo chake ramba uchikudziridza zvaunofarira uye kugona kugona. Ichi chi Ndinoyeuka chimiro chake nebasa kubva kwandakamira 4 yemamsoneti ake.
1.1 Nzvimbo yekuvaka
2 4 sonnets dzakatanhamara
2.1 Edza kuramba kurumbidza
2.2 Zvekuratidzira tambo
2.3 Izvo zvinonyaradza godo
2.4 Zverudo isa pamberi nenyaya isina kukodzera
Vanoti ndine makore matatu ndaitoziva verenga uye nyora. Izvi zvakamutungamira kuti ave nehukama hwakawanda nenzvimbo dzepamusoro dzedare re Viceroyalty yeSpain. Asi kune iyo 16 makore yakapinda Vakadzingwa ma carmelites yeMexico uye gare gare mu Kurongeka kwaSaint Jerome, kwaraigara nguva dzose. Dai iyo tsigiro uye patronage yeakasiyana maviceroys kuna avo akakumikidza zhinji nhetembo dzake.
Mubasa rake rekunyora akarima iyo lyric, iyo inovhara yakawanda yacho, iyo auto sakaramendi, theatre uye prose. Maitiro ake anoyeuka uye anobatana nemazita akafanana neaya Góngora, Lope de Vega kana Quevedo. Mushure mezvose, ivo vese ndeve Zera regoridhe. Asi sor Juana yakamira nekuda kwekusimudzira basa revakadzi yenguva yake kupfuura yekudzoserwa kumba uye mhuri.
Zvinoshamisa: Wechipiri Celestina, Kuedza kweimba, Rudo rwakawedzera maze
Sacramental mota: Iye mwari Narcissus, Tsvimbo yaJosefa Mufiri wesakaramendeto
Prose: Allegorical Neptune, Tsamba yeAthenagoric, Pindura kuna Sr. Filotea de la Cruz, Kuratidzira kwekutenda, lo uye villancicos
4 sonnets dzakatanhamara
Edza kuramba kurumbidza
Uyu waunoona, ane mavara anonyengera,
izvo, zveunyanzvi zvinoratidza runako,
ne syllogisms dzenhema dzemavara
kunyengedza kwakangwara kwepfungwa;
iyeyu wakanyepedzera kumubata kumeso
ruregerero zvinotyisa zvemakore
uye kukunda kuomarara kwenguva
kukunda kubva mukukwegura uye kukanganwa:
chinhu chisina maturo chekuchengetedza;
iruva mumhepo ine simba.
ugaro husina maturo hwekutongwa;
Chido chechinyakare, uye, zvinhu zvese zvichitariswa,
chitunha, iguruva, mumvuri, hachisi chinhu.
Nemarwadzo evanga rinofa,
chekuchema kwerudo ndakachema,
uye kuona kana rufu ruchasvika
Ndakaedza kuti ikure.
Zvese mune zvakaipa mweya unoseka,
kushungurudzika kwekushungurudzika kurwadziwa kwake kwakawedzera,
uye mumamiriro ese ezvinhu akafungisisa
kuti kwakave nezviuru zvakafa kune hupenyu humwe.
Uye riini, kurira kweumwe neumwe pfuti
akapa moyo, akapa zvinorwadza
zviratidzo zvekutora mweya wekupedzisira,
Ini handizive neiyo inoshamisa ramangwana
Ndakadzokera pachibvumirano changu ndokuti: chii chandinoyemura?
Ndiani anga achive nerufaro parudo?
Izvo zvinonyaradza godo
Rudo runotanga nekusagadzikana,
solicitude, kushushikana uye kusarara;
inokura nenjodzi, matambudziko uye kusahadzika;
batisisa kuchema uye kukumbira.
Mudzidzise kudziya uye kudzikama,
chengetedza uri pakati pevheiri dzinonyengera,
kusvikira zvichemo kana negodo
Anodzima moto wake nemisodzi yake.
Kutanga kwayo, pakati nepakuguma ndeichi:
Saka nei, Alcino, iwe uchinzwa kunzvenga
yaCelia, ndeipi imwe nguva yawakada mushe?
Chii chikonzero chiripo chekuti marwadzo anokubhadharira iwe?
Zvakanaka, mudiwa wangu, Alcino, haana kukunyengedza,
asi izwi chairo rakasvika.
Zverudo isa pamberi nenyaya isina kukodzera
Pandinoona kukanganisa kwangu uye kunyadzisa kwako,
Ini ndinofungisisa, Silvio, yerudo rwangu rwakashata,
huipi hwechivi hwakakura sei,
masimba ane chisimba sei echishuwo.
Kune yangu ndangariro ini handitendi
izvo zvinogona kukwana mukutarisira kwangu
mutsetse wekupedzisira weanozvidzwa,
nguva yekupedzisira yebasa rakaipa.
Ndinoda, pandinosvika kukuona,
ndichiona rudo rwangu rusingafadzi rwuchikwanisa kuzviramba;
asi ipapo kungofunga kunondinyevera
izvo zvinongondigadzirisa ini mukuzvitsikisa;
nekuda kwemhosva huru yekukuda
Zvinosuruvarisa zvakakwana kureurura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Sor Juana Ines De La Cruz. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 mamoneti